မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား ? - Thadin
HomeHEALTHYမျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား ?
February 12, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား ?
တင်းတိတ် ပျောက်ချင်လား သံပုရာသီးနဲ့အုန်းမုတ်ခွက် သွေးလိမ်းပါ လက်တွေ့ ပါ ။အုန်းမုတ် ခွက်သာ သက်သေကြည့်တော့ ။
သံပုရာသီးမသုံးပဲ အုန်းမုတ်ခွက်ပဲသွေးလူးပါကသုံးခါလောက်လူးပြီး မျက်နာပြင်ချောမွေ့လာမည်ကိုလက်တွေ့သိရပါလိမ့်မည် ။ ။
အခုပြောပြမယ့်ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက်လေးအကြောင်းပါ ။
ဖတ်ဘူးသမျှနဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးဖက်ဝင် တဲ့အုန်းမှုတ်ခွက်အကြောင်းလေးပါ ။
အညာဒေသရဲ့ ရွာတွင်းရွာပြင် ပြယုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချစ့်စရာ့ ဓလေ့ တွေ ဟာ…ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ ။
ရေချမ်းစင်မှာ သောက်ရေခွက်အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြု ကြတာကတော့ အုန်းမှုတ်ခွက် ပါ ။
အိုးမှုတ်ခွက် ကို အသေချာ အချော ကိုင် ၊ ခွက်နားစွန်း တဖက်တချက် မှာ အပေါက်ပြီး လက်ကိုင်ရိုးကို တတ်ထားပါ တယ် ။
အခွံမပါ၊အမွှေးမပါ ခွဲထားပြီး၊အသား၊အဆန်ထုတ်ထားပြီး၊လွှင့်ပစ်ထားသောအုန်းမှုတ်ခွက် အခွံကိုဆိုလိုပါသည်။
အုန်းမှုတ်ခွက်တစ်ခုကိုရေဆေး နေလှမ်းပြီး ပါက မီးရှို့ပါ။
ထွက်လာသောအငွေ့ကို သန့်သော ဒန်၊သတ္ထု အဖုံးတစ်ခုခုဖြင့်မှိုင်းခံပါ။( တစ်ချို့ကတော့ဓါးမကြီးတစ်ချောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးလုပ်ပါတယ် မြန်မာနည်းပေါ့ )
အပေါ်ယံအရေပြား ပွန်းသွားပါက၊အုန်းမှုတ်ခွက် အဆီကို ခြစ်ယူပြီးသုတ်ပေးပါ။
အနည်းငယ်စပ်ပြီး ပျောက်ပါသည်။( ပွေးရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်ပါသည် )
အပျိုဖော်ဝင်ကာစ လူပျိုအပျိုလေးတွေနဲ့ မျက်နှာမှာအဖုအထစ်တွေနဲ့လကမ္ဘာအလား အစက်အပြောက်တွေထူလပြစ်နဲ့ နဂိုရုပ်ခံကိုပျက်စီးစေတဲ့ ဝက်ခြံ တင်းတိတ် နေလောင်နာတွေအတွက် … …
ရက်တိုတိုအတွင်း ပျောက်ကင်းချောမွတ်နေစေဖို့ အုန်းမှုတ်ခွက် အရင့်တစ်လုံးကို သွေးပြီးသနပ်ခါးလိမ်းသလို ညတိုင်းလိမ်းအိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အုန်းမှုတ်ခွက် ဆိုပြီးလျှော့တော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့ လိမ်းထားလို့ခြောက်သွားရင် သနပ်ခါးနဲ့မခြားပါဘူး လက်လေးနဲ့အသာပွတ်ကြည့်လိုက် ချောမွတ်နေတဲ့အထိအတွေ့က . . . ဆက်မပြောတော့ဘူး လိမ်းဘူးတဲ့သူတွေသာမေးကြည့်ပါတော့ ……👍
ကိုးကား ‘ ရွှေအိမ်စည်
နန်း နီ လာ ထွန်း
တငျးတိတျ ပြောကျခငျြလား သံပုရာသီးနဲ့ အုနျးမုတျခှကျ သှေးလိမျးပါ လကျတှပေ့ါ ။အုနျးမုတျ ခှကျသာ သကျသကွေညျ့တော့။
သံပုရာသီးမသုံးပဲ အုနျးမုတျခှကျပဲသှေးလူးပါကသုံးခါလောကျလူးပွီး မကျြနာပွငျခြောမှလေ့ာမညျကိုလကျတှသေိ့ရပါလိမျ့မညျ ။ ။
အခုပွောပွမယျ့ခှကျကလေးက အုနျးမှုတျခှကျလေးအကွောငျးပါ ။
ဖတျဘူးသမြှနဲ့ကိုယျတှဆေ့ေးဖကျဝငျ တဲ့အုနျးမှုတျခှကျအကွောငျးလေးပါ ။
အညာဒသေရဲ့ရှာတှငျးရှာပွငျ ပွယုဒျတဈခုဖွဈတဲ့ခစျြ့စရာ့ဓလတှေ့ေ ဟာ…ပြောကျကှယျလုနီးပါးဖွဈနပေါပွီ ။
ရခေမျြးစငျမှာ သောကျရခှေကျအဖွဈ အမြားအားဖွငျ့ အသုံးပွု ကွတာကတော့ အုနျးမှုတျခှကျ ပါ ။
အိုးမှုတျခှကျ ကို အသခြော အခြော ကိုငျ ၊ ခှကျနားစှနျး တဖကျတခကျြ မှာ အပေါကျပွီး လကျကိုငျရိုးကို တတျထားပါ တယျ ။
အခှံမပါ၊အမှေးမပါ ခှဲထားပွီး၊အသား၊အဆနျထုတျထားပွီး၊လှငျ့ပဈထားသောအုနျးမှုတျခှကျ အခှံကိုဆိုလိုပါသညျ။
အုနျးမှုတျခှကျတဈခုကိုရဆေေး နလှေမျးပွီး ပါက မီးရှို့ပါ။
ထှကျလာသောအငှကေို့ သနျ့သော ဒနျ၊သတ်ထု အဖုံးတဈခုခုဖွငျ့မှိုငျးခံပါ။( တဈခြို့ကတော့ဓါးမကွီးတဈခြောငျးပျေါမှာတငျပွီးလုပျပါတယျ မွနျမာနညျးပေါ့ )
အပျေါယံအရပွေား ပှနျးသှားပါက၊အုနျးမှုတျခှကျ အဆီကို ခွဈယူပွီးသုတျပေးပါ။
အနညျးငယျစပျပွီး ပြောကျပါသညျ။( ပှေးရောဂါ လကျတှပြေ့ောကျပါသညျ )
အပြိုဖျောဝငျကာစ လူပြိုအပြိုလေးတှနေဲ့ မကျြနှာမှာအဖုအထဈတှနေဲ့လကမ်ဘာအလား အစကျအပွောကျတှထေူလပွဈနဲ့ နဂိုရုပျခံကိုပကျြစီးစတေဲ့ ဝကျခွံ တငျးတိတျ နလေောငျနာတှအေတှကျ … …
ရကျတိုတိုအတှငျး ပြောကျကငျးခြောမှတျနစေဖေို့ အုနျးမှုတျခှကျ အရငျ့တဈလုံးကို သှေးပွီးသနပျခါးလိမျးသလို ညတိုငျးလိမျးအိပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ
အုနျးမှုတျခှကျ ဆိုပွီးလြှော့တော့မတှကျလိုကျပါနဲ့ လိမျးထားလို့ခွောကျသှားရငျ သနပျခါးနဲ့မခွားပါဘူး လကျလေးနဲ့အသာပှတျကွညျ့လိုကျ ခြောမှတျနတေဲ့အထိအတှကေ့ . . . ဆကျမပွောတော့ဘူး လိမျးဘူးတဲ့သူတှသောမေးကွညျ့ပါတော့ ……👍
ကိုးကား ‘ ရှအေိမျစညျ
နနျး နီ လာ ထှနျး
This Month : 36287
This Year : 177744
Total Users : 536768
Total views : 2428163